नेपालमा आज थपिएका कोरोनाका २७८ नयाँ संक्रमित यी जिल्लाका ! प्रसासनले लगायो अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा ! « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:५७
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा २७८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। विकास देवकोटाले देशभरबाट थप २७८ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताए। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार ९ सय १२ पुगेको छ। संक्रमितमध्ये २ हजार ७ सय १७ पुरुष र १९५ जना महिला रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए। त्यस्तै आजमात्रै देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट ४३ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्केका छन्।
बिहीबार ३३४, बुधबार २०१ र मंगलबार २८८ जनाका कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। शुक्रबार पीसीआर विधिबाट ८८ हजार तीन सय ६६ र आरडीटी विधिबाट एक लाख ३२ हजार ९ सय ६६ जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट चार हजार दुई सय ३२ र आरडीटी विधिबाट सात हजार चार सय २ जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ।
शुक्रबार एकै दिन दैलेखमा ९१ जना, कपिलवस्तुमा ४४ जना, प्रदेश १ मा ३९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । दैलेख जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै दैलेख प्रशासनले शुक्रबार साँझ ६ बजेदेखि लागू हुनेगरी अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । दैलेखमा शुक्रबारमात्रै थप ९१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जिल्लामा हालसम्म २ सय १८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने एकजनाको निधन भएको छ । प्रशासनले अर्को आदेश नभइन्जेलका लागि राजपत्रमा उल्लेख भएका अत्यावश्यक सेवाबाहेकका काम नगर्न आदेश दिएको छ ।
काभ्रेका पाँचमा कोरोना
काभ्रेपलाञ्चोकका पाँच जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, जिल्ला कमाण्ड पोष्टले जिल्लामा एक महिलासहित पाँच जनामा कोरोना देखिएको आज जनाएको छ ।रोशी गाउँपालिकाका तीन, पाँचखाल नगरपालिकाका एक र पनौती नपाका एकमा कोरोना पुष्टि भएकोको कमाण्ड पोष्टका सदस्य एवं जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा नरेन्द्र झाले जानकारी दिए । उनले भने, “काभ्रेका पाँच जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ ।” उनका अनुसार सङ्क्रमितमध्ये एक महिला हुन् ।
सङ्क्रमितमध्ये तीन पुरुष र एक महिला केही दिनअघि मात्रै भारतबाट काभ्रेपलाञ्चोक आएको कमाण्ड पोष्टले जनाएको छ । सङ्क्रमित महिला धुलिखेल अस्पतालमा पित्तथैलीको शल्यक्रिया गर्न आएको र शल्यक्रियाअघि ती महिलाको पिसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको पोष्टले जनाएको छ । उनी पनौती निवासी हुन् । पाँचखालका सङ्क्रमित क्वारेन्टिन बसाइपछि घर फर्किएका व्यक्ति हुन् । रोशीका तीन सङ्क्रमित भने क्वारेन्टिनमै रहेको जनाइएको छ । सङ्क्रमितको स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष निगरानी भइरहेको प्रमुख डा झाले बताए ।
यसअघि यही जेठ १ गते राति काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा कोरोना भाइरसका कारण सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–९ राम्ेचकी २९ वर्षीया सुत्केरीको निधन भएको थियो । कोरोना भाइरसबाट निधन हुने ती महिला नेपालमा पहिलो घटना हो ।
भारतबाट करिब ३०० काभ्रेली स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा बसेका छन् । जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आएका विदेशिएका काभ्रेलीमध्ये आफैँ खर्च व्यहोर्न सक्नेलाई सुविधासम्पन्न होटल क्वारेन्टिन तथा नसक्नेलाई स्थानीय क्वारेन्टिनमा राख्ने तयारी गरेको छ । भारतलगायत विभिन्न देशमा ११ हजार ५८७ काभ्रेली रहँदै आएको कमाण्ड पोष्टको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।